Bushwhacker Luke Williams pane yake yekurovedza muviri, nei achidana Clearwater, Florida kumba & nezvimwe - Wwe
Bushwhacker Luke Williams pane yake yekurovedza muviri, nei achidana Clearwater, Florida kumba & nezvimwe
Sehafu-yehafu yeanonyanya kufarirwa makwikwi tag ma timu enguva dzese, Luke Williams - anonziwo Bushwhacker Luke - akagadzira rake re-mhete kutanga kwema1960. Williams uye waaishanda naye Bushwhacker Butch vakareba-vakagadzwa sechikwata chepamusoro chemaki vasati vauya kuWWF muna 1988. Williams, uyo anoramba achirwa nekuita zvitarisiko zvenguva dzose, akaendeswa kuWWE Hall Of Fame muna 2015 padivi neBushwhacker Butch.
Pandaifamba ndichienda kuClearwater, Florida mwedzi uno kurwendo rwekutsikirira, ndakave nemufaro wekushanyira Hulk Hogan's Beach Shop. Nhanho chete kubva kuchitoro chaHogan ndeye Clearwater Beach Fitness, iyo iri yaBushwhacker Luke. Fungidzira kushamisika kwangu, pakushanyira nzvimbo yekurovedza muviri mangwanani eSvondo, kuwana Williams iye muhofisi yake.
Bushwhacker Luke Williams nemoyo munyoro vakabvuma kuita hurukuro isina kurongeka neni nezvejimu nenzvimbo yeWedwater, uye zvinongedzo kubva kunhaurwa iyoyo zviri pazasi. Zvimwe pane Clearwater Beach Fitness inogona kuwanikwa online pa www.neworleansclubinfo.com .
Chii chakakusvitsa kuClearwater, Florida pakutanga?
Luke Williams: Ini ndanga ndichishanda neNWA uye ndanga ndichigara muCharlotte, uyezve takazogonerwa neWWF uye [Hulk] Hogan ndiye akati, 'Enda kuno kumahombekombe.' Ini ndaigara muTampa kare mukutanga kwema80s pandakanga ndichishandira Florida Championship Wrestling nzvimbo dzese dzisati dzamedzwa neWWF. Handina kumbogara mumahombekombe.
Terry [Hogan] akati, 'Huya kuno, enda kuno, ino ndiyo nzvimbo.' Ndave pano kubvira ipapo, kunze kwekunge ndaiva nemakore gumi stint pasi muPuerto Rico, ndichishanda Central America neCaribbean. Asi ndanga ndiri pano zvakanyanya.
Saka mamiriro ekunze ndiwo nzvimbo dzaunofarira kuve ...
sei kusarudza pakati pevakomana vaviri vaunoda
Luke Williams: Hongu, zvakanaka ndakauya kuno ndichibva kuNew Zealand. Chiteshi changu chekutanga chekupinda chaive Canada uye ini ndakashanda mhiri kweCanada uye ndakanga ndaringana nechando chiya. Izvo zvaive mune yekutanga 70s, handiti? Ndakanga ndine kukwana kwekuuraya kweropa, mamiriro ekunze uye izvo. Uye ini ndakashanda kutenderedza nyika kune vakasimudzira vakasiyana mumazuva ematunhu, uye paunenge uchikura ino ndiyo nzvimbo. Inzvimbo yakanaka kuve.
Wakawana riini iko kurovedza muviri?
Luke Williams: Ndakadzoka kubva kuPuerto Rico mugore ra2012 uyezve ndakazotora kiyi yekurovedza muviri muna Ndira 2013. Iyo jimi yanga iri pano, asi yakamhanyiswa. Uchitende kana kwete, yaive nevaridzi vatanhatu vakasiyana mumakore gumi nemaviri. Ndave pano kwemakore matanhatu.
Kune iwe, iwo makuru mafoto aunayo pamadziro, chii chinoita kuti ive iri nani pane mamwe majimu?
Luke Williams: Iyi ndiyo yekupedzisira yeyakare-chikoro gyms. Iyo yekudyidzana yakasarudzika uye vanhu vemuno vanouya uye vese vanozivana nekuti vanga vachiuya kuno kwemakore. Zvino vamwe vamwe vanhu vese vashanyi, vazhinji vacho vanouya nekuti vanoona zita rangu ipapo uye vanoda kusangana neni uye nekuzorora.
Vazhinji vevanhu vari kuvaka muviri, vakatarisa kukwikwidza munguva yemakore makumi masere nemapfumbamwe, unoziva? Iyo nguva inorangarirwa nekuti iyo inguva yeWWE ine mavara.
Pane mamwe mapurojekiti auri kushanda nawo here? Kana zvinhu zvaungade kuti nditaure kunze kwekurovedza muviri?
Luke Williams: Kwete, kwete mamwe akawanda mapurojekiti, shamwari. Ini ndichiri kubuda munzira kuti ndiwonekere uye ini ndichiri kurira mhete. Saka ndizvozvo, uye iwe unoziva, iyo yekurovedza muviri. Iyo webhusaiti ndeye neworleansnewitness.org uye iyo Twitter neFacebook iri [pasi] 'Clearwater Beach Fitness' - ndiyo yega yekurovedza muviri senge yasara.
zvekuita kana murume wako achikushora
kufarira mumwe munhu muchidanana
siya zvese kumashure uye utange hupenyu hutsva
gore rakadii owen hart akafa
mukomana angaziva sei kana musikana achimuda
kusvika padanho repamusoro rekuziva